အရှင်နန္ဒသာရ၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Maleအဖျောက်Myanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များ (1)ဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ အရှင်နန္ဒသာရ's Likes အရှင်နန္ဒသာရ's Groups
အရှင်နန္ဒသာရ postedastatus"ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ.....?"Aug 3, 2012 0
အရှင်နန္ဒသာရ postedastatus"စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းပါဘဲ"Jul 18, 2012 0
အရှင်နန္ဒသာရ joined Δℓωαʏƨ βʏɛ's groupGtalk နဲ့ VZO အကောင့်လေးတွေဖလှယ်ကြရအောင်နိုင်ငံအရပ်ရပ် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ စက္ကန့်မခြားဆက်သွယ်နိုင်စေဖို့ အလွမ်းတွေဖြေဖျောက်နိုင်ဖို့သတင်းတွေ လက်ခံ မျှဝေနိုင်ဖို့နဲ့မြန်မာ့ အငွေ့အသက်လေးတြွေိခုံလွှမ်းထားနိုင်ဖို့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို မေ့ပျောက်မသွားစေဖို့အတွက်ဒီ အဖွဲ့ လေးကိုတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ကဲ...... အားလုံးပဲ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ခင်စွာ ပေါင်းစည်းကြရအောင် ...See MoreJul 15, 2012 45
အရှင်နန္ဒသာရ postedastatus"ကုသိုလ်ဆိုတာ အပြစ်မရှိဘဲ မွန်မြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊"Jul 2, 2012 0
အရှင်နန္ဒသာရ သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။Jun 29, 2012အရှင်နန္ဒသာရ liked အရှင်နန္ဒသာရ's profileJun 29, 2012အရှင်နန္ဒသာရ leftacomment for thiri thandar lwinJun 26, 2012အရှင်နန္ဒသာရ ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Jun 24, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
ကုသလာ အန၀ဇ္ဖသုခ၀ိပါကလက္ခဏာ။ အပြစ်မရှိခြင်း, ကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိသောကြောင့် ကုသိုလ်မည်ပါသည် ။တစ်နည်းဆိုရသော် ၅ပါး ၈ပါးစသည်ဖြင့် ဆောက်စည်းအပ်သော သီလများရှိသည်အထဲမှမိမိတပ်စွမ်းနိူင်းသလောက်သော သီလတစ်ခုခုကို တစ်နေ့တစ်ရက်တစ်နာရီဘဲဖြစ်ဖြစ်သန္ဒိဋ္ဌာန်းပြုပြီးဆေက်တည်ခြင်းသည်လည်း ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူကို မိမိပိုင်ဖြစ်သော စားစရာသုံးဆောင်စရာဥစ္စာပစ္စည်တစ်ခုခုကိုစေတနာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်းသည်လည်း ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အနားယူနေချိန်လေးမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဒဂုဏ်တော်စသည်ဖြင့်ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကိုပွားများနေခြင်းသည်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရား ထားရှိခဲ့သောကောင်းမွန်းသောအရိပ်အာဝါသကိုခိုလှုံးရင် ကုသိုလ်ကောင်းမူတို့ကိုပွားများဆောက်တည် အားထုပ်နိူင်ကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေ......... Comment Wall (2 comments)
2:40am အချိန်July 5, 2012, တွင်Mrs Stella Kwale မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ Good Day,
Mrs Stella. 12:25pm အချိန်June 24, 2012, တွင်ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Aye Kyaw Thein
Top News · Everything Thaung Tan liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကံစီမံခြင်း မခံရလေအောင်…'3 minutes ago♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ commented on ကိုညီညီတင်'s blog post '"တစ် နှစ် သုံး ပဟေဠိ ၏ မူလ အစ "'"Thanks .."24 minutes ago♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ liked ကိုညီညီတင်'s blog post '"တစ် နှစ် သုံး ပဟေဠိ ၏ မူလ အစ "'24 minutes agoမတင်တင်မိုး liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကံစီမံခြင်း မခံရလေအောင်…'37 minutes agoNyi Nyi Aung liked thein wai's blog post 'ကုသိုလ်ပြုခြင်းနှင့်အတူ ဆုတောင်းချွတ်ချော်မှုများ။'51 minutes agoNyi Nyi Aung liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကံစီမံခြင်း မခံရလေအောင်…'55 minutes agoမတင်တင်မိုး liked မူကြိုဆရာ's blog post 'လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း'55 minutes agoကိုညီညီတင် posted blog posts"တစ် နှစ် သုံး ပဟေဠိ ၏ မူလ အစ ""အသက်ရှု ကျပ်စရာကောင်းတဲ့ သူ"1 hour agozayar aung commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း'"တရားအသိ မျှဝေမှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်"1 hour agozayar aung liked မူကြိုဆရာ's blog post 'လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း'1 hour agoကိုညီညီတင် leftacomment for Khin Myo Sint"လေးစားခင်မင်ရသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ ဆရာမ " Khin Myo Sint " ခင်ဗျား..
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ တွင် မိမိ…"1 hour agokham liked မူကြိုဆရာ's blog post '၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈'1 hour ago More... RSS